Hogaamiyayaasha EU-da oo aqbalay heshiiska Brexit ee UK • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hogaamiyayaasha EU-da oo aqbalay heshiiska Brexit ee UK
Hogaamiyayaasha EU-da oo aqbalay heshiiska Brexit ee UK
November 25, 2018 - By: Hanad Askar
Madaxda 27ka wadan ee xubnaha ka ah Midowga Yurub ayaa maanta oo Axad ah ansixiyey Heshiiska Brexit oo ay soo diyaarisay xukuumada Ingiriiska ee hogaamiso Raysalwasaare Theresa May.
Qoraalka heshiiskan oo ay Theresa May asbuucii lasoo dhaafay shaacisay ayaa gorgortankiisa soo socday muddo sanad iyo bar ah, wuxuuna heshiiskan wadada u xaarayaa in dalka UK uu ka baxo EU-da ugu danbeyn 29ka bisha Maarso ee sanadka soo socda.
Ansixinta hogaamiyayaasha dalalka EU-da ayaa kamid ahaa caqabadaha waaweyn ee horyaalay Theresa May, kadib markii dalka Spain uu horey ugu hanjabay in dib loogu noqdo qeyb kamid ah heshiiska gaar ahaan jasiirada Gibraltar ee Ingiriiska maamulo oo ku taal koonfurta Spain.
Hase yeeshee dalalka Midowga Yurub ayaa isku raacay inaan dib loogu noqon gorgortankii hore iyagoo ansixiyey heshiiska la horkeenay.
Caqabada hada hortaagan Theresa May ayaa ah in heshiiskan EU-da taageertay ay horgeyso Baarlamaanka UK oo la doonayo in isaguna ansixiyo kahor inta aan la dhaqan gelin ka bixitaanka dalkaasi ee Midowga Yurub.
Qaar badan oo kamid ah Xildhibaanada xisbi Xaakimka Ms.May ayaa si weyn uga soo horjeeda heshiiska gaar ahaan xildhibaanada xagjirka ah ee u ololeenayey Brexit, kuwaasi oo heshiiskan ku tilmaamay mid si weyn ugu jeen jeera dhinaca EU-da.
Xisbiga Mucaaridka ee Labour Party ayaa isaguna ku tilmaamay heshiiskan mid aan waxna soo kordhin, waxayna in badan oo kamid ah garabkaasi ay u ololeenayaan in afti labaad loo qaado ka bixitaanka Midowga Yurub oo ay u arkaan inay tahay tilaabo khaldan.
Baarlamaanka UK ayaa la filayaa in codka u qaado heshiiskan bisha soo socota.